Siyaasadda gaarsiinta - KAFTAN
Waxaan u rarnaa inta badan waddamada adduunka, dhammaan xirmooyinka gudaha iyo kuwa caalamiga ah. In kasta oo aan ku dadaaleyno in aan soo gaarsiino alaabada waqtigii aan cayimnay, ma dammaanad qaadi karno ama ma aqbali karno mas'uuliyadda alaab-ka-geynta lagu sameeyay meel ka baxsan waqtiga waqtigan. Maaddaama aan ku tiirsannahay shirkadaha maraakiibta seddexaad si loo fududeeyo keenida macaamiishayada annaga, ma aqbali karno qaan bixinta qarashaadka jeebka ama kharashyada kale ee ka dhashey keenida guntiga ama daahida awgeed.
Dhamaan amarada waxay qaadan doonaan ku dhawaad 3-5 maalmaha ganacsiga si loo socodsiiyo. Waqtigayaga dhoofinta badanaa waa gudaha 7-10 maalmaha ganacsiga Mareykanka, iyo 12-15 maalmaha ganacsiga dalalka kale. Si kastaba ha noqotee, waxay qaadan kartaa ilaa 20 maalmood oo shaqo in la gaaro iyadoo kuxiran meesha aad joogto iyo inta ay qaadanayso in laga gudbo kastamyada. Si taxaddar leh u ogow in wakhtiga keenidu uu kala duwanaan doono inta lagu jiro ciidaha ama goosgoos kooban oo xaddidan.
MUHIIM: Dhammaan amarradeenna waxaa laga soo dhoofiyay Shiinaha mana qaadno mas'uuliyadda nooc kasta oo cudur ah.
Fiiro 1: Annagu mas'uul kama nihin haddii xirmada aan la xallin karin sababta oo ah maqnaansho, aan dhammaystirnayn ama macluumaad khalad ah oo meel loo socdo. Fadlan gali faahfaahinta dhoofinta saxda ah marka aad hubinayso. Haddii aad xaqiiqsato inaad khalad ku sameysay faahfaahintaada rarka, si naxariis leh noogu soo dir cinwaanka [emailka waa la ilaaliyay] sida ugu dhaqsaha badan.
Fiiro 2 : Waddan kasta wuxuu leeyahay xadka canshuurta: xaddiga uu qofku billaabo bixinta canshuurta sheyga dibedda laga keeno. Canshuuraha iyo waajibaadyadu way ku kala duwan yihiin shey kasta oo dalka ku yaal waana inuu bixiyaa macmiilku.
Iibsadeyaashu waa loo oggol yahay inay isbeddel ku sameeyaan amarrada la dhigo, within 24 saacadood sameynta iibsashadooda iyo ka hor amarada waa la fuliyay. Kharashaad dheeri ah waxaa ku imaan doona iibsadayaasha wixii isbeddelo ah ee lagu sameeyo amarada ka dib 24 saacadood sameynta iibsigooda.
SIYAASADDA SOO SOCDA
Waa inaad ku codsato soo laabashada gudahooda 14 maalmaha helitaanka amarkaaga.
Habka loo soo celiyo shay:
1. Hubso inuu buuxiyo shuruudaha soo celinta saxda ah
2. Fariin noogu soo dir at [emailka waa la ilaaliyay] taasoo muujineysa ujeeddada loo celinayo shayga. Fadlan ku dar waxyaabaha soo socda e-maylka:
• Sawir / muuqaal shayga ku xiran shayga
• Calaamado iyo sumado ku lifaaqan
Waxaan kaaga jawaabi doonaa maalin shaqo gudaheeda gudaheeda 24 saacadood oo kaa caawin doona socodsiinta soo celinta shayga la iibsaday.
Haddii dalabkaaga soo noqoshada la aqbalo, waa inaad ku soo celisaa shayga (yaasha) gudaha gudaheeda 7 maalmo.
• Fadlan hubi in haddii aad soo celinayso alaabta (alaabta), ay tahay inay ku sugan yihiin xaalad kaamil ah, aan la adeegsan, aan la maydhin iyo iyaga baakad asalka ah (haddii ay habboon tahay)
• Iibsadaha ayaa mas'uul ka ah soo celinta qiimaha dhoofinta
• Kharashka asalka ah ee rarka lama soo celin doono
Isla markii aan helno shaygii alaab-iibsiga lagu soo celiyay, waxaan dib kuugu soo celin doonaa sicirka wax iibsiga oo waxaan kugu wargalin doonaa emayl.
SABABTA AY U SAMEEYAAN SIDOO KHUDBADA
Soo laabashadaada waxaa kaliya la oggolaan karaa iyadoo lagu saleynayo sababaha soo socda:
Sababaha Ujeeddooyinka Burbursan Alaabta ayaa waxyeelo soo gaarsiinta
Cilladaysan Sheyga ma shaqeynayo sida lagu sharxay soo saaraha soo saareheeda
Shay qaldanaan / khalad ah Maaha sheyga macaamiilku dalbaday (tusaale ahaan cabir khaldan ama midab khaldan)
Waxyaabaha ka maqan / qaybaha Waxyaabaha ka maqan / qaybaha sida ku xusan baakadaha
Kuma haboona * Macaamilku wuxuu helaa cabirka la dalbay laakiin kuma haboona *
Khalad Websaydh Sheyga ma u dhigma tilmaanta websaydhka, sharraxaadda, ama muuqaalka (arrintan waxaa loo aaneeyey cilad / macluumaad khaldan)
SOO NOQOSHADA & QAAB-celinta
WAALIDKAADA 7-MAALIN EE LACAG LA'AANTA GUUD
Joopzy.com wuxuu dammaanad ka qaadayaa in shey kasta oo inaga soo gato dib loogu soo celin doono gudaha 7 maalmaha shaqada, dib-u-iibsiga dammaanadda lacag-soo-celinta.
Codsi Lacag celin
Haddii aad xaq u leedahay in laguu soo celiyo si waafaqsan sababaha soo celinta ee kor lagu sheegay, waxaad codsan kartaa lacag celin "Koontadayda> Amarada”Ama waxaad isticmaali kartaa isku xirka hoose:
Xulo shay ama amarka oo dhan oo guji “Codsi soo celinta”Badhanka. Noo soo sheeg inaad jeceshahay lacag celin, oo leh sharaxaad cad oo ah sababta aadan ugu qanacsaneyn keenista oo aad u soo qaadatid sawirro ama agab kale oo taageeraya. Waxaan jeclaan lahayn inaan ogaano halka ay wax ka qaldeen ama sida aan u wanaajin karno qanacsanaanta macaamiisha iyo khibrada shaqada. Arrin kasta waxaa lagu baarayaa gudaheeda 1-2 maalmaha shaqada. Sidaas darteed, macaamilku wuxuu heli doonaa emayl, haddii macaamilku u qalmo soo-celinta, ka dib soo-noqoshada ayaa dhici doonta iyada oo la raacayo siyaasaddeena soo celinta ee hoos lagu sheegay.
WAQTIGII UGU DAMBEEYAY INAAD LACAGSATO MACALLINKA
Ikhtiyaar beddelaad: mar haddii shaygu maro hannaanka qiimeynta tayada, filo inaad ku hesho shayga gudahiisa 10-15 maalmaha shaqada laga bilaabo taariikhda aan helno macluumaadka raadraaca ee shayga la soo celiyay.
Ikhtiyaarka Lacag soo celinta: macaamiisha codsaday lacagta soo celinta waxay filan karaan inay ku heli karaan waqtiyadan soo socda:
Habka Bixinta (waqtiga iibsiga) Xulashada Lacag Celinta Waqtiga Hogaaminta Lacag celinta (si aad u aragto cadadka bayaankiisa bangiga)
Kaarka amaahda / Kaarka Debit Dibucelinta Amaah / Debit
Paypal Kala laabashada Paypal (haddii dheelitirka Paypal) 5-7 maalmaha ganacsiga
Dib ula noqoshada amaahda (haddii Paypal uu ku xiran yahay kaarka deynta) 5 ilaa 15 maalmood oo bangi ah
Xusuusin: Qaddarka waxaa laga dheehan karaa wareegaaga xisaabta ee soo socota
Dib u laabashada Debit (haddii Paypal ay ku xirnaato kaarka deynta) 5 illaa 30 maalmood oo bangi ah (Waxay kuxirantahay bixinta bangigaaga)